inkampani eNingizimu Korea General Motors athuthukile-umnyango ezinhlanu crossover compact Chevrolet Captiva ( "Chevrolet Captiva"). Kuye zenzelwe izinguqulo ezimbili: a enezihlalo amahlanu anesixhenxe enezihlalo. Ngesisekelo umshini ukubeka GM Theta yesikhulumi, okuyinto evame ukusetshenziswa izimoto ka Opel le Antara, le GMC le Isimo sezwe, le Vue Saturn.
Ngaphansi igama Chevrolet Captiva izimoto adayiswa e-India, e-Europe, eseningizimu ye-Asia naseMpumalanga Ephakathi. Futhi e-South Korea, kule moto ubizwa ngokuthi Daewoo Winstorm, Australia kanye Zealand okusha - Holden Captiva.
Umshini ifakwe ngohlaka lwensimbi nendawo ezizobekwa nge ukusonteka zahlelwa, iyavuleka amandla nomthelela. Inama-ABS ne ukubopha electronic iyunithi inqubo EBV futhi ashukumisayo ukulungiswa imodi ESC. Lapha kukhona imodi uhambo ngesikhathi DCS ekwehleni, ukubopha booster, a HBA imodi wokubacindezela nokuvikelwa asebenzayo ngokumelene nokugumbuqela izimoto Arp.
"Chevrolet Captiva" ubizwa nangokuthi ifakwe airbag kwesihenqo emibili ngaphambili. Kukhona enamaphuzu amathathu amabhande nge pretensioners. Kwamanye tinkhulumo, isethi kuhlanganisa zokuzivikela ohlangothini airbag ozikhethela.
Ezinhle Kakhulu 'Chevrolet Captiva "ngo-2011 kulolo vivinyo Euro NCAP.
Emakethe Russian imoto iza pair of likaphethiloli izinjini ukwakheka esiphambanweni. Eyokuqala four cylinder DOHC injini, namandla 2.4 amalitha. iphuzu lakhe ifinyelela "amahhashi" 136. It has torque eliphakeme 220 Nm / 2200 rev / imiz. Okwesibili Alloytec V6 injini has a ivolumu 3.2 amalitha, 230 wagxila amahhashi ne torque 297 Nm / 3200 rev / imiz. Injini yesibili yasungulwa legatsha lase-Australia GM Holden.
Ngaphezu kwalokho, eminye athuthukile nguqulo ye imoto udizili Z20S ivolumu amalitha amabili, torque nokukhawulela of 320 Nm at 2000 rev / iminithi futhi 150 wagxila "ihhashi".
Yakhelwe at GM Daewoo Design Center e Incheon, imoto nge C-100 e-isitshalo ilebula wethulwa ngo-2004 eParis Motor Show njengoba imoto umqondo Chevrolet S3X.
Futhi kube khona ethuthukisiwe "Chevrolet Captiva" ngo-2010. Inguqulo inokubukeka fresh yenkampani, chassis entsha, ngcono izinjini elingaphakathi entsha. Car ukumiswa lithuthukile: washintsha lo ukuqina we iziphethu, abangu ethuthukisiwe isimame nemigoqo. Ukwehlukahlukana entsha imoto ezingemuva oluvala amasondo ixhunyiwe njengoba kudingeka esebenzisa bamba electron-esihlelwe. Kulesi samuntu, torque basakaza phakathi izimbazo bufike 50 isilinganiso: 50.
Indlela enhle elilungisiwe "Chevrolet Captiva"! Izithombe umane okumnandi! E Tashkent, ngo-2011 ukunikezelwa kwama imoto ethuthukisiwe, oluqanjwe GM Uzbekistan. Abayithandayo yalesi brand bakwazi ukubona ukuthi imoto hhayi kuphela eseke ukubukeka okusha, kodwa futhi ukuze uthole injini ubukghoni amalitha amathathu 258 amahhashi traction futhi inhlukano 6-gearbox olusha. Kuye kwaba ngoshintsho abangelutho elingaphakathi imoto.
umgibeli Front futhi umshayeli manje uyajabula ukuze bakwazi ukuhlola ukuphumelela ezimbili zone ekulawuleni isimo sezulu. Futhi abagibeli lesibili irowu uzokwazi ukusizakala inketho entsha ngo-2013 - izihlalo ezifudumalayo!
Inani 'Chevrolet Captiva "iyatholakala iningi abashayeli - izindleko okuzenzakalelayo okusuka 31 777 kuya ku-38 836 zamaRandi. Le moto, okuyinto iphupho lapho kudingeka. Umshini ihlangabezana zonke izidingo ezihlukahlukene. Kuyinto ephelele uhambo olude, ukuthuthwa umthwalo, ngoba umkhaya uhambo ngaphandle komuzi. Kuyinto imoto ngokuphelele ukwahlukahlukana.
"UAZ Cargo" - weloli elithile elincane
Ithemba "Zenith" - Yevgeny Chernov
Owesilisa Caucasian namagama zesifazane